Nikon Coolpix S1100pj | Kubva kuLinux
irefotographies | | dzakawanda
Wakambofungidzira here digitaalinen kamera pamwe revatema purojekita? Zvakanaka, rega kufungidzira nekuti yatove yechokwadi nekuda kwekamera yedhijitari yazvino kubva Nikon, nyowani Nikon Coolpix S1100pj.
Neiyi yakanakisa kamera kamera unogona kuratidza ako akanakisa mafoto munzira hombe nekuda kwayo purojekita yakavakirwa mudzimba dzayo. La kuvheneka vanozviita kuburikidza ne LED uye ine simba re14 lumens iyo inobvumidza kujekesa nehukuru VGA mhando mune yakaderera mwenje mamiriro. Uye zvakare, purojekita yeiyi nyowani kamera ine inogona kuchinjika inorwisa-blur basa, kunyangwe izvi zvichida kutarisisa kwemaoko.
Nyowani Kutonhorera S1100pj Iyo haisi chete inokwezva kutarisisa kweiyi projekita asiwo yehunhu hwayo hwemufananidzo. zvake sensor ine 14 mamirioni pixels inopa ruzha rwakaderera uye resolution yakafanana yunifomu. Chiyero chayo chena chinopfuura kushanda uye ine mwenje wechisikigo uyo unobatsira iro ruvara rwemapikicha kuuya padhuze nemavara chaiwo.
Inofanirawo kucherechedzwa lens yayo iyo, kunyangwe iine malenzi madiki, haigadzike zvinokanganisa mumufananidzo sezvo iine yakanakisa Optical stabilizer. zvake 3 padiki kubatwa chidzitiro ine resolution yakanaka uye yakaderera simba rekushandisa.
Nezve maitirwo ayo, haina kana zvinyorwa, chete kusarudzwa kwekushushikana uye nechena chiyero. Naizvozvo, tinofungidzira kuti iyo Nikon Coolpix S1100pj Iyo inoitirwa vashandisi vasina ruzivo rwemberi uye vanosarudza kushandisa otomatiki sarudzo dzemakamera.
Mutengo waro haupfuure 400 euros (545 madhora).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » dzakawanda » Nikon Coolpix S1100pj
Flash Player 10.2 yave kuwanikwa